Nhau neSosaiti | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: News and Society
Izvo zvakasiyana-siyana zveSamara
Iyo Samara dunhu rakasarudzika mune zviwanikwa zviwanikwa: kune anopfuura mazana matatu mamaki echisikigo padunhu rayo rakakura. Pano ndipo panochengetwa zvisarudzika mhando dzemiti nemhuka. Kuchera kunoitwa mundima ino ...
Tsamba yemwanasikana yakabva kuna amai. Tsamba yemwanasikana kubva kuna amai nababa saizvozvowo
Kune ese mamiriro ezvinhu muhupenyu, uye zvinowanzoitika kuti amai nemwanasikana havagone kutaura zvakapusa, moyo pamoyo, vachizarura zvakavanzika zvavo uye kunetseka kune mumwe nemumwe. Mune ino kesi, unogona ...
Rostov-on-Don: vanhu veguta racho. Kuwanda kwevanhu uye kuumbwa kweRostov-on-Don
Vagari veRostov-on-Don nhasi vanopfuura miriyoni imwe zana zviuru. Inobata nechivimbo chinzvimbo chegumi mune runyorwa rwemaguta eRussia maererano nehuwandu hwevagari. Mugari wechigumi akaberekwa muna 1, ...
Nhoroondo uye tsanangudzo yeEyjafjallajokull volcano
Kubva makarekare, makomo anoputika anotyisa uye anokwezva vanhu. Vanogona kurara kwemazana emakore. Muenzaniso ndeye yazvino nhoroondo yeiyo Eyjafjallajokull gomo. Vanhu vanorima minda mumateru emakomo anopisa, vanokunda nhongonya dzayo, ...
7 February. Mazororo uye zviitiko zvezvakaitika kare nhasi
Maererano nekarenda yaGregory, Kukadzi 7 inoonekwa sezuva rechimakumi matatu nemasere regore. Munhoroondo yese, kwave kune zviitiko zvakawanda zvisingakanganwike pazuva iro. Izvi ndizvo zvichaiswa ino chinyorwa. Zuva remitambo yechando ...
Vakadzi vakapfuma muRussia: rating
Iyo "Vakadzi Vakapfuma muRussia" chiyero chakaburitswa nemagazini yeForbes kwemakore akati wandei akateedzana. Gore rino yaisanganisira vatori vechikamu makumi matatu vane hupfumi hwakatangira pamamiriyoni makumi matanhatu emadhora kusvika pamabhiriyoni emadhora ...
Mutambo weTa muChina. Ihwo unyanzvi hwetambo
Tea ine nzvimbo yakakosha muhupenyu hwevanhu veChinese, uye kunwa tii hwave hunyanzvi hwakasiyana hwemhemberero yetii. MaChinese anoda tii kune zvimwe zvinwiwa kunyangwe muzhizha: iyo ...
Zvirevo pamusoro pembwa. Zvirevo nezvirevo zvevana
Tsumo uye zvirevo chikamu chisinga tsanangurike chetsika dzerudzi rwupi zvarwo. Zvimwe zvirevo nemadimikira anoshandiswa nevanhu vasingazeze. Saka zvirimo zvinoenderana nekurira kwekutaura. Huwandu hukuru hweizvi hunozivikanwa ...
Zviyeuchidzo zvekuvakwa muMoscow: mazuva ano uye zvekare
Guta reMoscow rinoshamisa kwete chete nekuti ndiro guta guru reMaikandani. Yakachengetedza zviyeuchidzo zvakawanda zvedzinza renyika. Nechekare kubva muzana ramakore rechi15, kuvaka kweMoscow kwakave kuratidzwa kwetsika dzenyika. Architecture ...
Inoshamisa Baobab: chishamiso chemiti
Muti wechibaobab usina kujairika wakasarudzika mune zvese: muhukuru, chiyero, maererano netarisiro yeupenyu Kunyangwe kupona kwayo kwakanyanya kunenge kuri kuchiva chero chirimwa. Iyo baobab muti unoshamisa. Ndiye mumiriri akakurumbira wemhuri yeMalvov, ...
Ndiani akakanganisa uye ndiani anopiwa zita rino rekunyadzisa?
Pane imwe nguva imwe mhuri yakangwara yakauya kuzoshanya, zvakaenzana kuverenga zvakanaka uye kudzidza. Panguva yekuungana, senguva dzose, vakatanga kutaura nezve misoro yenyaya, kunyanya, nezvevatorwa vasiri pamutemo, ...
Tinodzidza kuti magirisiro anowonhora sei
Hupenyu hwe squirrel mune zvakasikwa hunoitika, sekutonga, mumasango. Hwaro hwechikafu chemhuka mbeu yemuti. Ndosaka squirrel achigara mumasango akasanganiswa, kwaanogona kuwana ...
Kupisa kuCyprus kwemwedzi
Iyo inodiwa yeMediterranean resort - chitsuwa cheCyprus - inozivikanwa pamhenderekedzo dzayo dzakanaka, okunze kwezuva uye yakaoma inopisa mamiriro ekunze. Muzhizha, mweya unodziya zvakanyanya zvekuti tembiricha muCyprus inodarika iyo 35 ° C mucherechedzo. Pano ...
Nyama inobhururuka: tsanangudzo, maruva, nguva yeupenyu
Nhunzi ndedzechirongwa cheDiptera, icho pane zvinopfuura zana nemakumi mashanu ezviuru zvipenyu pasi rose. Uye vashoma chete vavo ndivo vanotakura hutachiona, nepo huwandu hwacho husina njodzi zvakakwana, kunge mapuruguru. Saka manje ...
Maitiro ekubhandisa mazamu ako - nzira uye mazano
Mazamu ligation ndeimwe yenzira dzekumisa lactation inoshandiswa nevakadzi vanoda kuendesa mwana wavo kukudya kwekunyepedzera. Asi nzira iyi haina kuchengetedzeka. Kana iwe usingazive mabhandeji mazamu ako uye chii ...
Razors "Chic": muitiro wehutano, kuvimbika uye mukurumbira
Murume wese anorota shave yakatsetseka uye yakachena pasina kupisa, kucheka uye kutsamwa. Kuveura ndebvu zvakanaka inyanzvi inoda kuvandudzwa. Basa guru mukati maro nderechiridzwa. Nhasi…
Renewable uye zvisingawedzerwe zviwanikwa - kushandiswa kwakasimba. Dhipatimendi reZviwanikwa
Zviwanikwa zvakasikwa zvakakosha kwazvo kuruzhinji. Ivo vanoita senge kiyi sosi yekugadzirwa kwezvinhu. Mamwe maindasitiri, kunyanya kurima, anoenderana zvakananga nezviwanikwa. Kunyatso ...
Zvombo zvemasoja mumamyuziyamu eMoscow neMoscow munzvimbo (mufananidzo)
MuMoscow, munhu wese anogona kuwana hombe nhamba yezviitiko zvake. Zvombo zvemauto mumamiziyamu muMoscow zvinonakidza vashanyi. Zviratidziro kubva panguva yeGreat Patriotic War kusvika nhasi uno zvinoratidzwa ...
Zvokudya zvinotakura sei mumasikirwo. Kubereka nekubereka mbeu
Iyo carp mhuri ine inoshamisa sirivheri kapeti hove. Nekuda kwehupenyu hwake hwekuchikoro uye huremu hurefu, ave kuve anodikanwa nevabati vehove vazhinji. Ndokusaka ivo vachinyatso kudzidza maitiro ake uye mufananidzo ...
Kukwikwidza kwakakwana. Mienzaniso yekukwikwidza kwakakwana
Kuvandudza kugadzirwa, kudzikisa mutengo wekugadzira, kugadzirisa mashandiro ese, kugadzirisa mamiriro emabhizinesi - zvese izvi mamiriro akakosha ekuvandudza bhizinesi remazuva ano. Ndeipi nzira yepamusoro yekutora mabhizinesi kuti aite zvese izvi? ...
peji 1 peji 2 ... peji 79 Next Page
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,452 masekondi.